क. माधवकुमार नेपाललाई कृष्णराज श्रेष्ठको खुल्लापत्र – खुल्लापाना
क. माधवकुमार नेपालसंग मेरो केही जिज्ञासा
भत्काउने, बिगार्ने, तोडफोड गर्ने र हत्या हिंसा गर्ने संस्कारबाट आएको प्रचण्डजिलाई त म केही भन्न चाहान्न । किनभने कसैको सुझाव र सल्लाह सुन्ने धैर्यता उनीसंग छैन । माधव नेपाल मेरो आदरणिय नेता हुनुहुन्छ । उहां कै सल्लाह सुझाव र नेतृत्वमा मैले २०५० सालदेखि काम गर्दै आइरहेको हुँ । जङ्गल पसेर तोडफोड मच्चाइ रहेका माओवादिहरुलाई तपाईं कै ठुलो प्रयासले शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भएको हो । विगतको तपाईंको योगदानलाई हामी कहिले पनि भुल्दैनौ । नेकपा एमाले पार्टी निर्माण गर्ने सवालमा जननेता मदन भण्डारी र तपाईंको अहम भुमिका रहेको थियो ।
जननेता मदन भण्डारीको षड्यन्त्रपूर्ण हत्या पछि पार्टीको नेतृत्वमा तपाईं लामो समय रहनु भयो । त्यसपछि झलनाथ खनाल एक कार्यकाल र अहिले प्रधानमन्त्री के.पि. ओलि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । उहांलाई नेतृत्वमा विगतको महाअधिवेशनबाट तपाईं हामिले नै ल्यायका हांै । किनभने यो महाअधिवेशनको फैसला हो ।
अहिले तपाईं आफैले बनायको एमाले रुपि सुन्दर घरलाई तहसनहस गर्न विध्वंसकारिसंग मिल्न किन जानू भयो ? आफ्नो सुन्दर घरमा आफैले आगो लगायर आफ्नै पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री के पि ओलि लाई हटायर कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव लियर किन चाकडिमा जानू भयो ? के तपाईं लाई के पि ओलि भन्दा देउवा नै मन परेको हो ? यदि हो भने किन कम्युनिस्ट बनेर बस्नु भो, कांग्रेस नै भए के होला ? तपाईंको यो तरिकाले देश उंधोगतिमा गइ २०५२ कै अवस्था सृजना हुंदैन र ? यस्तो घटिया काम आफंै गर्ने अनि अरुलाई प्रतिगमनकारी भन्न लाज भएन ? आफु उल्टो गतिमा हिंड्ने अनि प्रतिगामी अरुलाई भन्ने कहांसम्मको न्यायोचित हो जवाफ दिनुस त ।
तपाईंको यो क्रियाकलापले दशकौंदेखि तपाईंको झोला बोकेर पार्टिमा लागेका म जस्तो कार्यकर्ता को मन नभांचिय कस्को भांचियला ? तपाईंलाई मैले २०४२ साल देखि चिनेको हुं । त्यस समय तपाईं शिक्षक फांट हेर्ने पार्टीको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो । मदन भण्डारी, के पि ओलि, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु लाई मैले २०४७ सालको परिवर्तन पछि मात्र दोहोरो चिनेको हुं ।
अहिले तपाईंको यो व्यवहारले म जस्ता हजारौ तपाईंका कार्यकर्ताहरु को मन नमिठोसंग भांचियको छ । तपाईंसंग थोरै मात्र चेतना भए आफ्नो घर फर्कनोस र भत्काउनु भयको आफ्नो घर बनाउनुहोस हामी साथ दिन तयार छौं । अन्यथा भीरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ कांध थाम्न सकिन्न । अझै पनि कतिपय कार्यकर्ताहरु भ्रममा छन । जो जो भ्रममा हुनुहुन्छ भ्रममुक्त भै आफ्नो घर मर्मत गर्न एक जुट हुन आह्वान गर्दछु । होइन भने के गर्छस मंगले आफ्नै ढंगले ………………….।
( कृष्णराज श्रेष्ठ लामो समय तत्कालीन नेकपा एमालेको जिल्ला तहको नेतृत्वमा रही साँसद समेत भइसकेका नेता हुन् ।)
Tags: क. माधवकुमार नेपालकृष्णराज श्रेष्ठखुल्लापत्रखुल्लापाना